Midowga musharixiinta oo war ka soo saaray fashilka shirkii Afisyoone & cidda mas’uuliyadda qaadaysa.
April 8, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Midowga Musharriixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa war kasoo saaray fashilkii ku yimid shirkii Afisyooni ee u dhexeeyay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah.
walaal somalidu caqli ku heshiiyan maleh sharcin mayaqaanin mid islam eyo mid kale kii isbida xoog wuxuu raba kan ka figrad duwan inu baabiyo xasad aan dhamad lahayen ciil aan baxeyn murugo haben kasta ba calosha lagu wadahesta gargaar Allah la helimaayo hadaan la calool fiyobaan
Somali hadeysan rabin inay isfahmaan, anigu waxaan qabaa in wadan wadan loo kala gooyo xal kale umajeedi wlh, dadkaan waa dad qabiil caabudo. xitaa hada hadii uu qofkale qabto madaxtinimada, wali way soconaysaa isqabsigaan iyo khilaafkan. opinion keyga waaye
Deni calooley iyo kooxdisa war dadka si toos ah wax ula qeybsada ama si cad u dhaha doorashadan mid loo wada siman yahay maha waxan go aan saney inan ka baxno. L
Arrintu ma ahan Cali Garleh, Caydiidna Garleh.
Fashilka waxaa ka masuul ah Nimanka diidey Doorasho Toos ah,mid dadban iney Soomaaliya ka dhacdo, ma garanayo nooca Doorasho ay doonayaan Deni iyo Axmed Kenyatta? Haddii si kale loo yiraahdo ahna xaqiiqada dhabta ah Haddii Doorasho Toos ah iyo Doorasho dadban ay diideen Wakiillada Kenya iyo Emirates, lama garanayo nooca Doorasho ay doonayaan?
Nuxurku waxaa Doorashada diidey waa Deni iyo Axmed Kenyatta.
Xalku waa jiraa waana in la abbaaraa,waqti kale la iskaga lumiyo ma ahan wax suurto gal ah.
Waa in waqti kordhin loo sameeyo He’ayadaha Dastuuriga ah waqti ku filan diyaar garoobo Doorasho Toos ah Hal Cod iyo Hal Qof.